Njirimara na arụmọrụ nke ikuku ikuku ikuku | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
N’isiokwu ndị bu nke a ụzọ anyị kwurula banyere ya kpoo kpo oku. N'ime ya, anyị kwuru banyere otu n'ime ihe ndị dị mkpa iji jiri ụdị kpo oku a geothermal okpomọkụ mgbapụta. Ọrụ ya yiri nke mgbapụta ọkụ ọkụ. Otú ọ dị, ike okpomọkụ ọ na-eji na-enweta site na ala.
Youchọrọ ịmara n'ụzọ miri emi ọrụ na njirimara nke igwe mgbapụta nke geothermal? Ozi a bara uru nke ukwuu ma ọ bụrụ na ịga wunye kpo oku n'ụlọ gị 🙂
1 Geothermal okpomọkụ mgbapụta
3 Tozọ wepụ geothermal ike
4 Vetikal na kehoraizin geothermal okpomọkụ mgbapụta
5 Ego mbido akụ na ụba
Iji mee ka echiche ndị ahụ dị ọhụrụ ma rụọ ọrụ nke ọzọ nke isiokwu ahụ, anyị ga-enyocha nkọwa nke ikpo ọkụ geothermal. Ọ bụ usoro kpo oku nke anyị ji mmiri ọkụ iji mee ka ụlọ dị ọkụ. Okpomọkụ ahụ na-abịa site na okwute ma ọ bụ mmiri mmiri ma nwee ike ịmị igwe eletrik. Ọ bụ echiche, ya mere, n'ime ike nke ikuku mmiri.
Igwe ikuku na-ekpo ọkụ nke mmiri na-arụ ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ ebe ọ bụla. Ojiji a na-agbasa n'ime ọha mmadụ, rue ọkwa dị otú ahụ ọ na-abawanye site na 20% kwa afọ. Mgbe anyị metụrụ akpa ndị dị n'azụ friji aka, anyị nwere ike ịhụ na a na-etinye okpomọkụ site na ngwa ahụ ma na-enye ya na kichin ndị ọzọ. Ọfọn, mgbapụta ọkụ na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke ahụ, mana na ntụgharị ihu. Ọ nwere ike iwepụta okpomọkụ nke dị n'èzí ma hapụ ya n'ime. Ọ dị ka ị ga-achọ ime ka mpụga jụrụ oyi.
Ma na friji na na mgbapụta ọkụ, e nwere tubes na-ekesa mmiri nju oyi. Mmiri a nwere ike ikpo ọkụ mgbe abịakọrọ ma dị jụụ mgbe ọ gbasaa. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ikpo ụlọ ahụ ka ọ nọrọ nke ọma n'oge oyi, mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ nke a na-agwakọta ga-ekesa site na onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke ikuku na-enye usoro nhazi.
Nwere ike ịsị na mmiri ahụ adịlarị "eji." Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-ajụ oyi ma gbasaa, na-abata na kọntaktị na geothermal isi iyi na "recharges" ya na okpomọkụ. A na-emegharị usoro a ugboro ugboro maka ikpo ọkụ na-aga n'ihu.
Otu ihe kwesiri iburu n'uche bụ na ịmị mmiri mmiri chọrọ ọkụ eletrik. Igwe mgbapụta nke ikuku nke ikuku na-arụ ọrụ nke ọma karịa nfuli ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ. Sistemụ ndị dị ugbu a Ha nwere ike ịmepụta 4 kW nke okpomọkụ maka kW ọ bụla nke ọkụ eletrik na-eme. Nke a na - eme ka ha rụọ ọrụ nke ọma, ebe ọ bụ na ha adịghị mkpa ịmị ọkụ, mana iji wepụ ya na ala.
N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụghị naanị nfuli na-eme ka ụlọ dị ọkụ. I nwekwara ike dobe ụlọ ahụ ka ọ dị jụụ n'oge oge ọkọchị. A na-akpọ nfuli ndị a na-agbanwe nfuli okpomọkụ. N'okwu a, a valvụ bụ onye na-eduzi direction nke mmiri mmiri. Ya mere, ikpo ọkụ nwere ike igbasa n'akụkụ abụọ.
Tozọ wepụ geothermal ike
Ọtụtụ ndị na-eji ụdị kpo oku a amaraworị mgbapụta okpomọkụ nke geothermal. Nnukwu uru bụ iji ikuku si n'èzí kpoo ụlọ. Okpomoku nke uwa enweghi oke, ya mere a na-ewere ya dị ka ụdị nke ume ọhụrụ. You nwere ike ịnweta kpo oku mgbe ọ bụla ịchọrọ ya na n'ụzọ dị mma ma dịkwa ọnụ ala. Na mgbakwunye, ị ga - enyere aka ilekọta gburugburu ebe obibi ma belata ikuku ọkụ gas na ikuku. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-ebelata mmetụta na-agbawa obi nke mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa.
Otu n'ime ihe ndọghachi azụ nke nfuli ọkụ nkịtị bụ na arụmọrụ ha belatara mgbe okpomọkụ dị n'èzí dị ezigbo oyi. Nke a pụtara na ọ bụrụ na achọrọ okpomọkụ ahụ n'ezie n'ime ụlọ, mgbapụta ahụ enwechaghị arụmọrụ. Otú ọ dị, nke a anaghị eme na geothermal okpomọkụ mgbapụta, ebe ọ bụ na ọ na-ewepụta okpomọkụ site na ime ụwa. N’okpuru ala okpomọkụ ahụ kwụsiri ike ma ọnọdụ okpomọkụ na-adị otu ọ bụrụgodi na ọ na-ajụ oyi karịa n’èzí. Ya mere, ọ naghị efunahụ arụmọrụ n'oge ọ bụla.
Vetikal na kehoraizin geothermal okpomọkụ mgbapụta
Zọ kachasị ewu ewu iji wepụ okpomọkụ bụ vetikal okpomọkụ na-ekpo ọkụ geothermal. A na-etinyekarị ya mita 150 ruo 200 n'okpuru elu. Ọkpọkọ na-arụnyere na gburugburu grooves gwuru n'okpuruala. Mmiri na-ekesara ha ihe nwere mmiri ọgwụ na-egbochi ikuku nke nwere ike ibuli okpomọkụ ahụ iji belata mmiri jụrụ oyi.
Ọzọ ọzọ bụ kehoraizik geothermal okpomọkụ mgbapụta. N'okwu a, tubes jupụtara na mmiri ma lie ya ihe dị ka mita isii n'ofe ala. Ha bụ usoro chọrọ nnukwu ndọtị iji nwee ike iwepụta ọkụ kwesịrị ekwesị iji kpoo ụlọ dị larịị. Otú ọ dị, ụgwọ ya dị ala karịa mgbapụta vetikal.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe obi abụọ na ọ bara uru n'akụkụ ndị dị nso na mmiri sitere n'okike dịka ọdọ mmiri, osimiri na ọdọ mmiri. Nke a adịghị ka nke a. Igwe ihe na-ekpo ọkụ nke ikuku nke ikuku dị ka ọfụma n'akụkụ ebe ndị a ka ị nwere ike iji ha dị ka isi iyi ọkụ ọkụ.
A na-eme mgbanwe ikpo ọkụ na mbara ala site na onye na-achịkọta ihe dị na mbara igwe, nke nwere ike ịbụ ụdị abụọ: ndị na-achịkọta ihe na-ekpo ọkụ na ntanetị. Ke akpa idaha, a circuit nke akpa (2 ma ọ bụ 4) na-etinye n'ime a perforation ka 50-100 m dị omimi na 110-140 mm na dayameta. N'okwu nke abụọ, a na-etinye ntanetị dị larịị nke omimi 1,2-1,5 m.
Ego mbido akụ na ụba
Nnukwu ihe mgbochi nke na-egbochi ụzọ nke iji ume ọhụrụ bụ ego akụ na ụba izizi. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ mpaghara, ọ dị mkpa itinye ego isi na mbido wee mezie ya oge. Ọnụ ego mbụ nke ikpo ọkụ geothermal karịrị nke usoro kpo oku ọdịnala.
Ọ bụrụ na ezubere ya iwu n'ime ezinụlọ nwere ike ịkwụ ụgwọ n'etiti 6.000 na 13.000 euro. Nke a bụ nzuzu maka ndị ahụ niile ọrụ ha anaghị akwụ ha nnukwu ụgwọ. Site na ego ahụ ị nwere ike ịzụta ụgbọ ala! Otú ọ dị, nfuli okpomọkụ nke geothermal na-aba uru na ogologo oge. Ha na-enye ohere iji belata oriri nke ụgwọ ume n'etiti 30 na 70% n'ihe gbasara ikpo ọkụ na 20-50% na jụrụ oyi.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị dị njikere iji ụdị kpo oku a wee malite ịchekwa ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike ikuku » Geothermal okpomọkụ mgbapụta